Chainalysis - ny orinasa izay nandrava ny anarana Bitcoin - Vaovao farany - Blockchain News
Chainalysis – ny orinasa izay nandrava ny anarana Bitcoin
Ao amin'ny firenena mandroso indrindra, mpanao asa eny ambanin'ny fomba hampidirana fitsipika ho ny fitsipika sy ny fanakànana ny cryptocurrencies. Ao amin'ny fandrafetana ny faktiora, Matetika izy ireo nanampy ny orinasa mba hanara-maso ny sakana tambajotra, iray amin'ireo malaza indrindra – Chainalysis. afa-tsy 2017 Nahazo ny orinasa momba ny $ 700,000, miara-miasa amin'ny fanjakana sy ny sampan-draharaha misahana ny fampiharana ny lalàna.
Chainalysis naorina tany 2014 ny Jano Moller, Jonathan Levin sy Michael Gronager. Ny tena fitarihan ' ny orinasa dia ny fanaraha-maso sy ny cryptocurrency blockages noho ny ady varotra sy ny famotsiam-bola hosoka. Orinasa izay manome tolotra maro mitovy, fa saiky ny departemanta Amerikana, ary koa ny fikambanana Eoropeana toy ny Europol, mihatra amin'ny Chainalysis.
Tamin'ny taon-dasa nahazo Chainalysis mihoatra noho ny $ 700,000 avy amin'ny US Department of Lasa nisy Security (DHS), ny US anaty ny hetra Service (IRS) ary ny US fifindra-monina sy ny fomba amam-panao Control Service (RANOMANDRY) fa ny asany. Koa tamin'ny taon-dasa, ny orinasa dia nifandray tsy tapaka ny fikambanana tsy miankina, araka ny porofoin'ny tatitra isaky ny telo volana maro manondro fifandraisana sy fiaraha-miasa fifanarahana.
Ary iray amin'ireo mpanjifa tsy tapaka ny Chainalysis no US Birao Federaly Momba ny Famotorana (FBI), izay matetika feno ny fanao ny orinasa ny tantara tato anatin'ny taona vitsivitsy.
Assistance in fanadihadiana
Noho ny fiaraha-miasa amin'ny Chainalysis, ny FBI nahavita hahazoana vokatra manan-danja eo amin'ny fanadihadiana ny zavatra nataon'ny mpandray anjara ny tsy mitonona anarana ara-barotra toerana Silk Road, ary koa ny mianatra momba ny antsipirian'ny ny Tsy niraharaha ny Mt Gox fifanakalozana. Sady koa anie, ny Chainalysis fanarahan'ny mpiasa ny tsy hita 650,000 BitCoins, izay nanjary fantatra nandritra ny fihainoana ao amin'ny Kongresy.
Ankoatry ny, noho ny asan 'ny fanaraha-maso ny orinasa, tamin'ny volana Novambra 2017, fitsarana federaly ny Etazonia nandidy ny Coinbase fifanakalozana hanome angon-drakitra ho tsiambaratelo 14,000 mpampiasa. Toy izany fanapahan-kevitra avy eo ny fahazavan 'ny famotorana eo anivon'ny US anaty ny hetra Service (IRS), izay ahiahiana fa mpampiasa ny fifanakalozana mandray fidiram-bola avy amin'ny fivarotana ny cryptocurrency, matetika, hiala avy amin'ny fandoavan-ketra. Noho izany, araka ny IRS tahirin-kevitra ho an'ny 2015, ny hetra amin'ny tombony avy amin'ny asa amin'ny bitcoin nandoavana ihany 802 olona.
Vokany eo amin'ny Fifidianana Akama
Ny orinasa tranonkala milaza fa mino cryptocurrency Chainalysis sy ny fibahanana ny teknolojia, ary ny orinasa ny tanjona dia ny hanome fitaovana fikambanana amin'ny asa atao mba hisorohana ny hosoka amin'ny sehatra ny ara-bola, raha momba ny zo tsiambaratelo. Na izany aza, raha ny tena izy, ny orinasa blockanalysis tolotra olona mifandray manokana amin'ny varotra manokana ao amin'ny tambajotra.
Noho izany, noho ny asa ny Chainalysis, ny IRS, ohatra, manara-maso ny fihetsiky ny mpihazona ny BitCoins sy ny hafa, ary manara-maso cryptocurrencies ny fandoavana ny hetra. Ary izany dia midika fa fifanakalozana amin'ny cryptocurrencies, toy ny bitcoin, tsy azo heverina ho tsy fantatra anarana. koa, orinasa izay mampiasa ny tolotra Chainalysis mandray tsipiriany tatitra momba ny varotra ao amin'ny andian-tsoratra, ny mety ho mpanjifa sy ny mpiara-miombon'antoka.
Ny zava-misy fa ny orinasa Chainalysis dia ny fahazoana bebe kokoa ny mpanjifa avy any amin'ny solontenan'ny fanjakana sy ny rafitra, mampanahy maro mpikambana ao amin'ny fiaraha-monina izay mino crypto amin'ny ho avy ny cryptocurrency tsy misy fanjakana fitsipika sy ny zo ny olona rehetra ho anarana. Na izany aza, araka ny lohan 'ny tahirim-bola Capital Hermitage Bill Browder, noho ny fihetsiky ny orinasa toy ny Chainalysis, cryptocurrencies dia lasa manintona kokoa sy azo antoka ho an'ny vola fomba mpampiasa vola.
Previous Post:Blockchain News 26 Janoary 2018
Next Post:Blockchain News 27 Janoary 2018